तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जयललिताको मध्यरातमा निधन,७ दिन राजकिय शोकको घोषणा
तामिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जयललिताको सोमबार मध्यरात १२ बजे निधन भएको छ । उनलाई आईतबार ह्रदयघातका कारण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । हिजो साझ त्यहाँका स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले उनको निधन भएक...
सिरियाको विभिन्न इलाकामा भएको आक्रमण दर्जनौं मारिए
अलेप्पो (सिरिया), २० मङ्सिर । सिरियामा विद्रोहीको बलियो प्रभाव रहेको प्रान्तमा आइतबार भएको संदिग्ध रसियाली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ४६ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद...
डोनाल्ड ट्रम्प र उनकी छोरीका अस्वभाविक लाग्ने केही तस्बिर
डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इभान्का ट्रम्प को हुन ? ट्रम्पको अमेरिककाको राष्ट्रपतिमा उदयसँगै उनको पनि चर्चा भइरहेको छ । उनलाई धेरैले धनि बाबुकी पुल्पुलिएकी छोरीको रुपमा लिन्छन तर उनले आफुलाई एक सफल उद्यमी ...
अस्ट्रियाली राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचनमा मतदान हुँदै
भियना, १९ मङ्सिर । पश्चिम युरोप भित्रको सानो राष्ट्र अस्ट्रियामा राष्ट्रपति पदका लागि आइतबार निर्वाचन हुँदैछ । मुख्यतः दुईजना उम्मेदवार – दक्षिणपन्थी लोकप्रिय खेमाका र बामपन्थी पट्टि झुकाव रहेका पूर्व...
जाकर्ता, १९ मङ्सिर । इन्डोनेसियामा शनिबार हराएको विमान दुर्घटनग्रस्त अवस्थामा आईतबार भेटिएको छ । शनिबार १६ जना प्रहरीलाई लिएर उठेको विमान पश्चिमी इन्डोनेसियाको बताम आईसल्याण्डबाट विमानस्थलसँग सम्पर्क ...
कोलम्बियामा आधा शताब्दीसम्म जारी द्वन्द्व अव शान्तितर्फ
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । कोलम्बियामा आधा शताब्दीभन्दा अगाडीदेखि जारी द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ । कोलम्बियाको सबैभन्दा ठूलो विद्रोही समूह रेभोलुसनरी आम्र्ड फोर्स अफ कोलम्बिया (फार्क)सँग भएको शान्ति सम्झौता...
मलेसियाली मुसलमानद्वारा आङग सान सुकीको विरुद्धमा प्रदर्शन
क्वालालम्पुर, १९ मङ्गसिर । म्यानमारमा अल्पसंख्यक आदिबासी रोहिङ्ग्या मुसलमान जनसमुदाय उपर भएको आमहत्याको बिरोध गर्दै आइतबार मलेसियाली मुसलमानहरुले राजधानी क्वालालम्पुरमा म्यानमारसरकार बिरुद्ध ठूलो प्रद...
विमान दुर्घटनामा मृतक खेलाडीको मृत शरीर ब्राजिल पठाइयो
मेडिलिन (कोलम्बिया), १८ मङ्सिर । कोलम्बियामा गत सोमबार भएको विमान दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाहरुको शव शुक्रबार ब्राजिल लगिएको छ । ब्राजिलका खेलाडीको टोली रहेको उक्त विमान घटना हुँदा ७१ जनाको मृत्यु भए...
ट्रम्प र सेइबीचको फोनवार्ता ताइवानको चालबाजीमात्रः बेइजिङ
बेइजिङ (चीन), १८ मङ्सिर । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा हालै निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प र ताइवानी नेता सेइ यिङ–वेनबीच भएको फोनवार्ता ताइवानी नेता सेइको चालबाजी मात्र भएको भन्दै यसबाट चीनको अमेरिकासँगको सम्बन्धमा...
चीनमा कोइलाखानी विस्फोट हुदाँ २१ जनाको मृत्यु
हारविन, १८ मङ्सिर । चीनमा कोइलाखानीमा विस्फोट हुँदा शुक्रबार राती २१ जनाको मृत्यु भएको छ । चीनको हेइलोङजिआङ क्षेत्रमा बिहीबार भएको दुर्घटनामा २१ जनाको मृत्यु भएको चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरुले पुष्टि ग...
ओबामा, ट्रम्प, पुटिन सबैभन्दा अघि मोदी
बहुचर्चित टाइमको अनलाईन सर्भेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकै अघि पुुगेका छन् । उनी लागतार तेस्रो हप्ता पनि नम्बर एकमा पर्न फल भएका छन् । टाइमले गरेको अनलाईन सर्भेमा मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ...
पर्यटकमाथि होटेलमा सामुहिक बलात्कार
भारत घुम्न पुगेकी एक अमेरिकन नागरिकले आफु सामुहिक बलात्कारमा परेको बताएकी छिन् । उनले इमेल मार्फतआफु बलात्कारमा परेको कप्रहरी समक्ष उजुरी दिएकी हुन् । उनको उजुरीपछि प्रहरीले भारतस्थित अ‍ेमरिकी दुत...
नीति विपरित ट्रम्पले गरे ताइवानी प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता
अमेरिकी नवनिर्वाचत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ताइवानका राष्ट्रपति साई इंग–वेनसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । अमेरिकी नीति विपरित उनले वार्ता गरेका हुन । ट्रम्पले ताइवानी राष्ट्रपतिलाई टेलिफोन गरेको ...
सडक दुर्घटनामा १८ व्यक्तिको मृत्यु
बेजिङग, १७ मङ्सिर । चीनमा शुक्रबार भएको एक सडक दुर्घटनामा कम्तीमा १८ व्यक्तिको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएको छ । करिब २० यात्रु सवार रहेका उक्त मिनीबस चीनको मध्य प्रान्त हुबेइको...
भिडियो गेमले गरायो विमान दुर्घटना !
ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरु सवार विमान कोलम्बियामा भएको दुर्घटनाका बारे नयाँ तथ्यहरु बाहिर आउन थालेका छन् । विमानमा इन्धन सकिएका कारण दुर्घटना आएलगत्तै विमानमा किन पर्याप्त इन्धन थिएन भन्ने तथ्य पनि प्...
आफ्नो सबै व्यवसायबाट अलग हुने ट्रम्पको घोषणा
वासिङटन, १६ मङ्सिर । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले आफ्नो सम्पूर्ण व्यवसायबाट आफू अलग रहने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् उनले आगामी महिना आफ्...
कोलम्बियामा इन्धनको अभावले विमान दुर्घटना भएको पुष्टी
कोलम्बिया, १६ मङ्सिर । गत मङ्गलबार कोलम्बियाको पहाडी इलाकामा ठोक्किँएर भएको विमान दुर्घटना इन्धन अभावको कारण भएको पत्ता लागेको छ । ‘ककपिट भ्वाइस रिकर्डर’ रिकर्ड भएअनुसार सो दुर्घटना तेल अभावको कारण भ...
नवनियुक्त पाकिस्तानी प्रधान सेनापति आतङ्कबादविरुद्ध लड्न प्रतिबद्ध
इस्लामाबाद, १६ मङ्सिर । पाकिस्तानका नवनियुक्त प्रधान सेनापति जनरल कमार जावेद बाज्वाले आतङ्कबाद विरुद्धको लडाइँलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन् । पाकिस्तानी पूर्व सेनाधिपति जनरल राहिल सरिफले अवकाश प...
पोर्ट औ प्रिन्स, १४ मङ्सिर । हाइटीका पूर्व राष्ट्रपति मिसेल मार्टेलीले समर्थन गरेका व्यापारी जोभेनेल मोइजले राष्ट्रपति पदको पहिलो चरणको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको सोमबार पछिल्लो औपचारिक नतिजामा देखिए...
थाइल्यान्डमा मन्त्रिपरिषद्ले राजकुमारलाई नरेश बनाउने मार्ग खोल्यो
थाइल्यान्ड, १४ मङ्सिर । थाइल्यान्डको मन्त्रिपरिषदले युवराज महा भाजिरालोङकोर्नलाई नरेश बनाउन उनको नाम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यसबाट युवराज भाजिरालोङकोर्न आफ्ना पिताको देहावसानको निकै सातापछि यस मुलुक...